ယခုတွင်ကျယ်စွာသောမိန်းကလေးများကိုယခုနှင်ထုတ်လိုက်သည် - ယခုအချိန်တွင် MEAN GIRLS ၏မသက်ဆိုင်သောသရုပ်ဆောင်များဘယ်မှာရှိသနည်း။ - သတင်း
Mean Girls ၏သရုပ်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်နေရာသို့သွားခဲ့သနည်း။ Lindsay Lohan, Rachel McAdam နှင့် Amanda Seyfried တို့သည်အောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများကိုဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိသော်လည်းအနည်းငယ်မျှသာသိသာထင်ရှားသည့် Mean Girls ဇာတ်ကားများကိုနောက်တဖန်မတွေ့ရပါ။ လိုပဲ Damian ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ကီဗင်ဂျီသည်စစ်မှန်သောဘဝ၌ရက်ပ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သလား။ Regina ဂျော့ခ်ျရဲ့ညီမကိုကစားခဲ့တဲ့မင်းသမီးကဆက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။
ကျွန်မခင်ပွန်း tinder အပေါ်လျှင်ထွက်ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို
ကောင်းပြီ, ငါတို့ဟောင်းကောင်းတစ် ဦး တူးရှိခဲ့ပါတယ်နှင့် Mean Girls ၏အနည်းငယ်ဆီလျှော်သွန်းယခုအထိဖြစ်ကြောင်းအတိအကျအဘယ်အရာကိုထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, ထွက်လှည့်အဖြစ်, သူတို့ထဲကတစ် ဦး အံ့သြစရာငွေပမာဏနေဆဲသရုပ်ဆောင်နေကြသည်!
ဒံယလေက Franzese - Damian
Damian အဓိကသရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမည်သေချာပေါက်အချို့အမှတ်ရစရာလိုင်းများရှိခဲ့ပေမယ့်ခြုံငုံသူသည်ရှည်လျားသောများအတွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတကယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သရုပ်ဆောင်ဒံယလေက Franzese ကတည်းကအလွန်အလုပ်များခဲ့ - ကအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်အသိအမြင်များအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတက်မတ်တပ်အစုံလုပ်နေတာသို့မဟုတ် RuPaul ရဲ့ဆွဲပြိုင်ပွဲအပေါ်ပေါ်ထွန်းခြင်းရှိမရှိသူကအားလုံးကိုပြုပါတယ်။
Daniel Franzese (@whatsupdanny) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ဒံယလေက 2016 ခုနှစ်တွင်သူ၏ရည်းစားရန် (အားလုံးနေရာများ၏) တစ် Starbucks ကအတွက်စေ့စပ်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့က 2018 ခုနှစ်ကချွတ်တောင်းဆိုသူသည်သူသည်လက်ရှိမည်သူမဆိုနှင့်အတူမလျှင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
Lacey Chabert - Gretchen
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ သူမပလတ်စတစ်မှာ Regina မှာဒုတိယအသံအမြင့်ဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးအုပ်စုထဲကထွက်လာကတည်းက Gretchen ဟာအနည်းဆုံးမိန်းကလေးအုပ်စုထဲကပါ။
Lacey Chabert (@thereallacey) မှမျှဝေသော post ကို။
သူမယောင်္ကျားမိန်းကလေးမဖြစ်မှီကအဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအသေးအဖွဲနှစ်မျိုးနှင့်စတင်ကြပါစို့ - ပထမအနေဖြင့်သူမသည်တောရိုင်းဆူးပင်များရှိ Eliza Thornberry ၏အသံကိုပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ Mila Kunis မလွှဲပြောင်းမီ Family Guy ရှိ Meg Griffin ၏မူလအသံဖြစ်သည်။ ဒီတော့အဲဒီမှာရှိတယ်။
ထိုအချိန်မှစ၍ သူမကိုမတွေ့ခဲ့ဖူးသူမည်သူမဆိုအတွက်သူမသည်ရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံးတွင်အလုပ်များနေသည် (သင်မကြားဖူးကြောင်း၊ သူမသည်ဆိတ်သငယ်နှင့်လက်ထပ်သည်) - သူတို့သည်ဤမျှလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။
သူမ 10 တုန်းက Ariana Grande
Rajiv Surendra - ကီဗင်, G
ကီဗင်ဂျ (G) သည်မိန်းကလေးများအတွက်စိတ်မပါ ၀ င်စားမှုများသောအထင်ကရအဖွဲ့ဝင်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သရုပ်ဆောင် Rajiv Surendra, ကံမကောင်း, rapping အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုလိုက်ရှာပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကသူ့ Instagram ကိုကနေတရားစီရငျအနုပညာရှင်တစ်နည်းနည်းဖြစ်လာသည်။
Rajiv Surendra (@rajivsurendra) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
သူသည်စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ My Backyard ရှိ The Elephant ဟုခေါ်သောစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးသားခဲ့ပြီး၎င်းသည်ရူပဗေဒမှာအနည်းငယ်ထူးဆန်းသည်။ ဒီလူဟာ Pi of Life ရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္toကိုအနိုင်ရဖို့မအောင်မြင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေအကြောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးရေးခဲ့တယ်။ လူသား, ထိုရုပ်ရှင်ပင်ကြောင်းအမှတ်ရစရာမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကံကောင်းတာကစာအုပ်ကထိခိုက်ခဲ့ပုံရသည် - ကသူ့ကိုဆုများစွာကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
သူသည်သူ့အခန်းကဏ္ for အတွက်ကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားရကြောင်း၊ သူ့ဘ ၀ နှင့် ဦး ဆောင်သူဇာတ်ကောင်များအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုများရှိခြင်းကြောင့်သူသည်တိုရွန်တိုတိရစ္ဆာန်ရုံဘေးတွင်ကြီးပြင်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါကဟာသမဟုတ်ဘူး
နောက်တစ်နေ့တွင်နောက်ထပ်အရေးမကြီးသောအခြားမိန်းကလေးဇာတ်ကောင်များ၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ဂျေဆင်၊ ဒန်နီယယ်ဒက်စတိုတိုမှကစားသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကကျွန်ုပ်၏ရှပ်အင်္ကျီထဲကို ၀ င်ပြီးအအေးဆုံးကနေဒါ ၁ ယောက်နှင့်အတူဆုံခဲ့သည် @Jason_Priestley ။ ထွက်ခွာသည် #PrivateEyes ည 8 နာရီမှာတနင်္လာနေ့ @GlobalTV 🧔 pic.twitter.com/5m2YrM18f5
- Daniel De Santo (@Daniel_DeSanto) နိုဝင်ဘာလ 23, 2020
သူသည်တီဗွီများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း - Paw Patrol ရှိအသံခရက်ဒစ်သည် UK ပရိသတ်များအတွက်မှတ်မိလောက်သောတစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ထိုအကြောင်းဒံယေလအကြောင်းကိုတွေ့ရှိရရှိပါတယ်အားလုံးအကြောင်းပါ!
Stefanie Drummond - ဗေသနိရွာ
ဘီတီနီယန်ကို Stefanie Drummond ကသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့ကြယ်ပွင့်တွေလိုပဲအမေရိကန်ပရိသတ်တွေအတွက်သရုပ်ဆောင်အလုပ်များနေပါတယ်။
ကျနော်တို့မကြာမီကကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Next ကိုများအတွက် Ariana Grande ရဲ့ဂီတဗီဒီယိုထဲမှာ, Mean Girls ၏သွန်းအချို့နှင့်အတူသူမ၏မြင်တော်မူ၏။ ဝမ်းနည်းစရာမှာစတီဖနီ၌ IMDB မှလွဲ၍ အခြားအွန်လိုင်းရှိနေခြင်းမရှိပါ။
နီကိုးလ် Crimi - Kylie
နီကိုးလ်သည်ဤစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံး၏အနည်းဆုံးပမာဏအနည်းဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်နောက်တစ်ကြိမ်သူမ Regina မကောင်းသောအရိပ်ကိုမည်သို့မလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သနည်း။
နီကိုးလ်ခရမီ (@nicolecrimiart) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ယခုအသက် ၂၄ နှစ်တွင်နီကိုးလ်သည်အနုပညာရှင်၊ ဆရာမနှင့်ဆေးကျောင်းသားဖြစ်သည်။ သူမပန်းချီကားများကိုလိုက်စားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ Mean Girls နောက်မှခရက်ဒစ်လေးခုသာရှိသည်။
တစ်စုံတစ်ဦးက tinder အပေါ်လျှင်မည်ကဲ့သို့ဈတွေ့နိုင်ပါသည်
စကားပြောတာ ရေနံချောင်း သူမကသူတို့အားကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုမအောက်မေ့ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အေးဂျင့်သည်ကျွန်ုပ်၏အမေကိုခေါ်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်လှည့်လည်နေစဉ် Beyonce ၏ 'Naughty Girl' သို့အငြိုးအကဖြင့်ကခုန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်၊ သူမကပြောပါတယ် ငါ့အမေက 'နီကိုးလ်၊ မင်းကိုဒီကခုန်မှုတွေကိုသင်ပေးမယ်၊ ငါမင်းတို့သူတို့ကိုထပ်ခါထပ်ခါမလုပ်စေချင်ဘူး' လို့ပြောတယ်။ ငါဒါကိုထပ်ခါထပ်ခါကျင့်သုံးခဲ့တယ်။
Alisha Morrison - လီ
Alisha Morrison သည် Highschool ရှိသောင်းကျန်းမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Lea အမည်ရှိ Unfriendly Black Hotties တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ အချိန်ကာလ၏အဆိုးရွားဆုံးအလုပ်အကိုင်အကူးအပြောင်းကာလ၌သူသည်နေရာအားလုံးရှိရွှေတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
alisha_morrison (@alisha_morrison) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
လီကပြောခဲ့သည် BuzzFeed သူမသည်ယောင်္ကျားမိန်းကလေးများထွက်ပေါ်လာသည့်အချိန်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံတွင်သူမမည်သို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်နှင့်ပတ်သက်သည့်ရယ်စရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုမျှဝေခဲ့သည်။ ငါကလူတွေကိုလက်မှတ်တွေရောင်းပြီးရောင်းတာပေါ့၊ နောက်မှပြန်ဆင်းလာပြီးစိတ်မပျက်တော့ဘူး၊ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်မန်နေဂျာကဖောက်သည်တွေဆီကနေဝေးကွာသွားအောင်ကိုယ့်ရုံးတွင်းရှိအခြားနေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ရတော့မယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီ၊
Dwayne ဟေးလ် - နည်းပြ Carr က
နောက်ဆုံးမှာတော့နည်းပြ Carr ကကစားခဲ့တဲ့ Dwayne Hill! ဟေးလ်သည် animated စီးရီးများစွာနှင့်ကြော်ငြာများစွာကိုပြုလုပ်ပြီးအလွန်အောင်မြင်သောအသံသရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူကမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးအပြောင်းအလဲအကြီးမားဆုံးအသွင်ပြောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောရင်ငါဆိုလိုတာက
Dwayne Hill (@vitamindwayne) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
David Harbour vibes
•သင်သည်ဤမိန်းကလေးဗိုင်းရပ်စ်ကို ၁၄/၁၅ ရလျှင်မိမိကိုယ်ကိုဆွဲခေါ်နိုင်သည်
•အရှုံးသမားကိုဝင်ပါ၊ သင်မည်သည့် Mean Girls ၏ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ရှုရန်ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုပါ
• Mean Girls ဆိုတာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ဒီမှာလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ